China Ndezvipi zvinodiwa zvehunyanzvi zvezita replate | CHINA MARK Mugadziri uye Mutengesi | Weihua
Hard disk shell + rutsigiro rwemakomputa
Tsika Yesimbi Mavara
alum ndiro (ndiro yemhangura) + anodhinda + chitambi
Alum ndiro + yekutsika + CD zviyo + anodizing
Alum zinc alloy diecast + galvanize + pendi
Alum + inotonhora forge + pende (anodize) + zviyo
simbi + mhangura + etching + kupenda + electroforming
Nemazvo tsikwa (nemazvo CNC)
Alum + Yakatsikwa Kugadzira + cnc + Anodized
Optical bemhapemha + PVD ra + Spray
Simbi nameplates Type
Nameplate Dhizaina Maitiro
Ndezvipi zvinodiwa zvehunyanzvi zvezita replate | CHINA MARK
Kana zvasvika kune zvehunyanzvi zvinodiwa zve nameplate, inofanirwa kusanganisira chiyero chechigadzirwa chezita replate.Ang ataura nezvenyika yedu mune yakareba nguva, neshoko rekuti "sign" rinofukidza yega yega nzvimbo yekushandisa munda ine mucherechedzo wechigadzirwa.
Naizvozvo, mamwe matanho akakodzera anongogadzirirwa masaini emuchina. "Signage" ine zvimwe zvaisingakwanise, uye haichakwanise kuratidza nekumirira kuvandudzwa kwetekinoroji yazvino.Ndinotenda kuti zviyero zvakasara zvichaita kuti madhipatimendi ane chekuita atarise kuzadzikisa zvinotarisirwa. yevamwe vashandi muindastiri.
Pamberi pekuunzwa kwenzira nyowani, iwo muyero we "signage" wakaita zvinotevera maitiro.
1959: kubva kune raimbove hushumiri hwemakambani indasitiri yePeople's Republic of China, hushumiro hwakapa yakajairwa jb-59 yezvigadzirwa signage kekutanga;
1964: yekutanga kudzokororwa kwetsika iri pamusoro, yakachinjirwa kuJB - 64;
1982: jb-82 yakagadziridzwa neyaimbove hushumiri hwemakambani indasitiri yePeople's Republic of China, uye izwi rekuti "nameplate" rakashandiswa kekutanga mukududzirwa kweichi chiyero;
1989: yakanyora kunyorwa kweiyo yenyika muyero wemasaini ekutaura kwevanhu;
1991: yenyika mureza wePeople's Republic of China, signage, GB / t13306-91
Iwo ari pamusoro matanho akati wandei, achiri akatarisana ne "muchina chikwangwani" uye kuvandudza, kunyangwe isingakwanise kuratidza zita replate chigadzirwa kwese kutaridzika uye mamiriro azvino mamiriro, asi izvo zvakajairika zvehunyanzvi zvinodiwa zvinogona kuwiriranwa zvepasi rose. , zvehunyanzvi zvinodiwa zvine chekuita nemazita epamhepo zvakapfupikiswa seinotevera.
1. General zvekushandisa zvinodiwa
（1） Kana iro zita replate raungana pamwe nechigadzirwa, hukama pakati pehupamhi hwegomba rekusungira pazita rezita uye hupamhi hwenzara inosunga.
(2) kunamira zita replate hakudi kuita gomba rinosunga.
Iyo zita replate rinogona kusungirirwa kune icho chigadzirwa nema rivets, screws kana dzimwe nzira dzinogoneka.
Iyo yemhando yekuregererana uye chimiro uye chinzvimbo shiviriro yezita rezita
Izvo zvirimo, mazwi uye zviratidzo pane zita rezita
A. Izvo zvirimo, kurongeka uye vara rezita rezita rinosarudzwa nemugadziri wezita rezita maererano nemirau yakakodzera.
Mabhii echiChinese ari pazita replate anowanzo gamuchira mavara akareruka akashambadzirwa nekumisikidzwa nehurumende, uye mavara echinyakare anotenderwa kushandiswa mune zvakakosha zvido.Vatambi vechiChinese vanokurudzirwa mu boldface, rwiyo rwakareba uye manyorerwo enziyo. Mazita echigadzirwa uye mazita ekugadzira anotenderwa kushandisa mamwe mafonti akajeka, akanaka uye ari nyore kuverenga.
Saizi yemafonti echiChinese mavara, mavara echiLatin, mavara echiGreek, manhamba echiRoma uye echiArabic anoreva izvo zvinopihwa zve GB4457.3.
D. Kana zvichikosha kuisa chiratidzo (fekitori logo) uye yemhando yepamusoro chigadzirwa logo pazita rezita, izvo zvinodiwa zvinoenderana nezvinodiwa.
E. Iro zita, unit uye chiratidzo yeyuniti yeuwandu hunoshandiswa mundiro yezita inotevedzera zviga zve GB3100.
A. Zvishandiso zveplateplate zvinosarudzwa zvinoenderana nezvinodiwa uye nemamiriro ekushandira echigadzirwa. Zvinhu zvinotevera zvinokurudzirwa.
(a) maindasitiri akachena aruminiyamu L1, L2, L3, uye L4;
B) simbi isina chinhu 0Cr19Ni9, 1Cr18Ni9 uye 1Cr17;
(c) yakakanda simbi, yakakungurutswa simbi simbi, nezvimwe;
(d) machira epurasitiki uye thermoplastic;
(e) yendarira jira / H62 (H68) uye zvimwe zvinhu zvinogona kushandiswa kune zvakakosha zvinodiwa.
B. Iyo zita replate rinosungirirwa pachinhu chekubatanidza icho chinogona kusungirirwa zvakasimba kune yakati sandara, yakatsetseka, isina-mafuta simbi kana isina-simbi pamusoro pasina kuita (senge solvent kana kudziyisa).
C. Ukobvu hwendarira dzealuminium uye zvimwe zvinhu zvesimbi zvinokurudzirwa seizvi: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm.
Zvese zviri pamusoro ndezve muchina signage.
Iyo yekumberi kwezita replate rinofanira kuve rakatwasuka, hapafanire kuve neyakajeka burr uye chimiro chezino uye waveform.The kumberi kunofanirwa kuve kwakatsetseka uye kwakachena.Border mutsetse inofanirwa kunge yakaenzana, yakatwasuka, haifanire kukombama kutyorwa.
Hukuru uye ukobvu hwemavara, zviratidzo uye mitsara zvinofanirwa kuiswa mucherechedzo, zvakarongedzwa zvakaenzana, hazvifanirwe kutyorwa uye kusanzwisisika.
(3) iyo yepamusoro haifanire kunge iine mitswe uye pachena kukwenya, pamwe nekukanganisa kwayo yakajeka ngura, makwapa, mumvuri.Ikupfekedza kunofanirwa kuve kwakasununguka kubva pores, matubvu, mhute, mavara, makwinya, zviratidzo zvinopenya uye zvidimbu zviri pachena.
Iro zita remazita harizoonekwe rakapetana, kuunyana, kuzvimonera, kubvarura uye kunamatira kuvuza.
Ruvara rwezita replate rinofanira kunge rakajeka uye richirova, uye ruvara uye kubwinya kunofanirwa kuve yunifomu, uye hapafanire kunge paine pani. Kune maviri kana anopfuura akadhinda mazita ezita, mitsara iri pakati pemirau inofanirwa kuve yakachena uye yakajeka, uye hapafanire kunge paine mukaha pakati pemaviri mavara.
Zvinoenderana nezvinodiwa zvechigadzirwa pamusoro zvinogona kurapwa matte, yakagadzirwa nemate kana matte.
Izvo zvinoitwa zvinodiwa
Bhavha adhesion haizove yakaderera pane (GB1720 mune zvigadzirwa zvegiredhi 4.
Ruvara rwekutsanya kuzuva rinofanira kutevedzera izvo zvinopihwa zveGB730: kushandiswa kwemukati hakufanirwe kunge kuri pasi pe4; Kunze kwekushandisa hakufanirwe kunge kuri pasi pechikamu chechitanhatu.
(3) anodized aruminiyamu nameplate, ine rima ruvara rwemberi oxide firimu ukobvu haifanire kunge iri pasi pe10um; Mwenje mavara haafanire kunge ari pasi pe5um.
(4) munyu kupfapfaidza kuramba, mushure me 48h bvunzo, inofanirwa kutevedzera zviga zveJB4159.
(5) kupisa uye mwando kuramba, mushure megumi bvunzo, inofanirwa kusangana neJB4159 nhanho 2.
Mildew kuramba, mushure me 28d bvunzo, inofanirwa kusangana neiyo GB2423.16 zvigadzirwa zvegiredhi 2.
(1) zviyero zvichave kuongororwa neyakaenzana gauges uye muganho gauges.
Isa zita replate mundiro kuti riongororwe nemutongi kana anonzwa, uye usashandise masimba ekunze anoita kuti ndiro iumbike.
(3) Chitarisiko mhando
Zvakajairika kuona acuity kunofanirwa kuongororwa pamwe nekuvhenekera kwe500lx uye chinhambwe chekuona chisiri pasi pe250mm.
(4) yekunamatira adhesion zvinoenderana nezviripo GB1720
(5) kukakavara kwezuva kuzuva zvinoenderana nezvakapihwa GB8427 kana GB8428.
(6) Munyu mhute kusagadzikana zvinoenderana nezviripo zveGG2423.17.
Kupisa uye mwando kuramba maererano ne GB2423.3.
Kurwisana neforoma kunotungamirirwa neGG2423.16.
(1) Zita replate richapfuudza kuongororwa nedhipatimendi rekutarisa kwemugadziri usati wabva mufekitori.
(2) kukura uye kutaridzika kwemazita eplate zvinoenderana nezvakapihwa ne GB2828 zvakajairwa kuongorora chirongwa chechipiri chekuenzanisira, huwandu hwekuongorora Ⅱ, inogamuchirwa yemhando yepamusoro (AQL) 4.0 cheki kugamuchirwa.
(3) mashandiro uye mhando yezita replate rinofanira kuongororwa nekutambirwa zvinoenderana neyakajairwa kuongorora uye sekondari sampling scheme yakatarwa neGG2828, yakakosha yekuongorora nhanho s-2 uye anokwanisa mhando nhanho (AQL) 2.5.
(4) Iko mashandiro uye mhando yezita replate ichaedzwa pasi pemamiriro ezvinhu anotevera.
(a) kupedzisa maitiro ekugadzira;
(b) shanduko mukugadzirwa kwezvinhu kana zvigadzirwa;
(c) zvikumbiro zvevashandisi;
(d) nguva nenguva (yegore) ongororo.
Kuti usimbise kudiwa kwemanejimendi manejimendi, iwo akakodzera zviyero zve nameplate kuyedzwa zvakapfupikiswa seinotevera.
GB191 kurongedza, kuchengetedza uye chiratidzo chekufambisa
GB730 yebhuruu mvere yakajairwa yekutsanya kune mwenje nemamiriro ekunze
GB1720 nzira yekutemerwa kweyekunamatira kwefirimu
GB / T1731 nzira yekumisikidza firimu inochinjika
GB / T1732 pendi firimu kukanganisa kusagadzikana nzira
GB / T1733 kutsunga kwemvura kuramba kwepende firimu
GB / T1740 kutsunga kwehunyoro uye kupisa kupisa kwepende firimu
GB / T1766 pendi yemavara uye varnishes - nzira dzekuyera dzekukwegura
GB / T1771 pendi yevara uye varnishes - kutsunga kwekurwisa munyu spray
GB / T2633 yekuongorora nzira yemidziyo enamel zvigadzirwa
GB / T2893 chengetedzo ruvara
GB / T3979 chinhu chemavara kuyera nzira
GB / T4706 zvakajairika kuchengetedzeka zvinodiwa kumhuri uye zvakafanana magetsi kushandiswa
GB8898 kuchengetedza zvinodiwa zvemumba uye zvakafanana zvinowanzoitika zvemagetsi zvemagetsi nemidziyo inoenderana inopihwa ne grid simba
GB9276 yakasikwa mamiriro ekunze ekuyedzwa bvunzo nzira yekupfeka
Zvemagetsi mamiriro eJT / T279 mugwagwa mukuru wekusayina chiratidzo bhodhi
GB1804 shiviriro uye inokodzera
GB11335 muganho kutsauka kwekushivirira dhiidhi haina kucherechedzwa
GB11335 cherekedza kushivirira Angle muganho kutsauka
GB2423.3 yakakosha bvunzo yekodhi yemagetsi uye zvigadzirwa zvemagetsi kunyorova bvunzo nzira nzira bvunzo Ca: inogara yakanyorova kupisa bvunzo nzira
GB2423.16 yakakosha bvunzo bvunzo nzira yemagetsi nemagetsi zvigadzirwa
GB2423.17 zvigadzirwa zvemagetsi uye zvemagetsi zvigadzirwa zvekuyedzwa kwenzvimbo bvunzo maitiro Ka: munyu pfapfaidzo bvunzo nzira
GB2828 batch-ne-batch yekutarisa kuverenga sampling maitiro uye sampling tafura (inoshanda pakuongorora kweanoramba achienderera mabatch)
GB3100 yepasi rose system yemayuniti uye mashandisiro ayo
GB4957 eddy yazvino nzira yekuyera ukobvu hweasina-kuitisa akaremerwa pane asiri-magineti esimbi substrates
GB8013 general specification yeanodic oxidation mafirimu ealuminium uye aluminium alloys
Yekuyedza nzira yekumira nekukasira kune mwenje weGB8427 machira - xenon arc
Yekuyedza nzira yekukasira kwemavara kune mwenje weGB8428 machira - carbon arc
GB / T12967.1 uye avhareji yekupfeka kuramba kweanodic oxidation firimu yealuminium alloy yakatemwa nekusasa kwekuyedza tester
GB / T12967.2 uye aluminium alloy anodic oxidation nevhiri yekupfeka tester kuona kupfeka kuramba uye kupfeka coefficient ye anodic oxidation firimu
JB4159 ine zvigadzirwa zvemagetsi zvakajairika zvehunyanzvi zvinodiwa
Mifananidzo yesimbi mazita mahwendefa
Matare mazita: rodha nhasi!
Tiri pano kuzokushumirai!
Tsika yesimbi logo mahwendefa - takaona uye takarovedza mhizha dzinogona kugadzira zvigadzirwa zvakavimbika, zvemhando yepamusoro simbi vachishandisa mhando dzese dzekupedza uye zvishandiso zvinoshandiswa mumabhizinesi anhasi. kukubatsira iwe kuita sarudzo yakanakira yako nameplate logo!
Post nguva: Chivabvu-23-2020
Huizhou Weihua Technology Co, Ltd. © Copyright - 2019-2021: Kodzero Dzese dzakachengetedzwa.
Hot Zvigadzirwa - Sitemap cnc machine zvikamu zvakaringana, kondinendi chaiyo kutsika, kunyatso tsikisa inc, cnc chaiyo machining,